शनिबार सांझ अल्डरसटको प्यालेस हलमा नेपालबाट आएका गायक टंक बुढाथोकीको विशेष प्रस्तुतिमा कार्यक्रम गरिएको थियो । त्यसअवसरमा गायक बुढाथोकी र बेलायतमै रहेका गायक मनसुदन थापाको साथै सयपत्री कल्चर समुहका तर्फबाट आकर्षक प्रस्तुति गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको पहिलो चरणमा प्रमुख अतिथि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले बेलायतमा नेपाली कला संस्कृति प्रबद्र्धनको लागि सयपत्रीले गरेको भुमिकाको प्रशंसा गरे । एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष योगकुमार फगामीले पनि सयपत्रीकोे बेलायतमा नेपाली कला संस्कृति जगेर्ना गर्ने कार्य उदाहरणीय रहेको बताए । समुहका अध्यक्ष डम्बर सिंहले आफ्नो संस्थाको पृष्ठभुमि र उद्देश्यबारे बताए ।
सो अवसरमा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एलबी गुरुङ र वर्तमान अध्यक्ष डम्बर सिंहले राजदूत डा. सुवेदीलाई विशेष सम्मान गरेका थिए । सचिव गौरव क्षेत्रीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए भने उपाध्यक्ष प्रभु गुरुङले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए ।
दोश्रो चरणमा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो जसको संयोजन कल्चर कोअर्डिनेटर मनोज अन्जानले गरेका थिए । त्यसक्रममा चर्चित गायक टंक बुढाथोकीले रुपै मोहनी, धन बिनाको मन लगायतका आफ्ना चर्चित गीतहरु सुनाए । स्थानीय गायक मनसुदन थापाले पनि गायन प्रस्तुत गरे ।
त्यस्तै, सयपत्री समुहकै कलाकारहरु प्रभु गुरुङ, कविता गुरुङ, पुष्पा गुरुङ, सुवास गुरुङ, सन्तोक गुरुङ, अविसा गुरुङ, मोलिका गुरुङ, गिता केसी, प्रतिभा केसी, सन्ध्या तिवारी, सुरगंना शाही, शितल तिवारीले पनि नेपाली कला, संस्कृति झल्काउने विभिन्न आकर्षक नृत्य देखाए । बाल कलाकारहरु लिकोन गुरुङ, सेलिना शाही र रितिका खरेलले पनि आकर्षक प्रस्तुति गरेका थिए ।
सन् २००६ मा स्थापित सयपत्री कल्चरल समुहले हरेक वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने क्रममा यो वर्ष पनि सांस्कृतिक सांझ आयोजना गरेको थियो ।